Pcba Fa Fast Charger
Famatsiana herinaratra mpamily LED
Custom PCBA sy Custom charger Quick
Shipping handoavana ny trosa
Advanced Product Solution Teknolojia Co., ltd
APS no nanao ny fiarovana ny tena manokana sy ny mombamomba azy no ahitana rehefa mampiasa ny tranonkala, ka dia isika eo amin'ny fanajana ny lalàna sy ny fitsipika momba ny mpanjifa sy ny mpanjifa fiarovana ny fiainana manokana ao amin'ny famoriam-bola, fampiasana, fitehirizana sy fampitana ny tahirin-kevitra manokana. Standard.
Ianao hisoratra anarana eo amin'ny tranonkala sy ny vaovao nangonina dia;
Ianao manaiky ny mpiray, mpiray, mpiasa, ary mety ho liana amin'ny vokatra sy ny tolotra izay mety ho mahaliana anao (raha tsy efa nilaza fa tsy maniry ny handray izany hafatra).
Collection sy Processing ny Tena Manokana Data
Manangona izahay, hitantana ary hanara-maso manokana ny tahirin-kevitra amin'ny fankatoavana. Mba hanome aminareo hiaraka amin'i asa, dia mila manome ny tahirin-kevitra sy tsy fantatra anarana manokana izay inoantsika fitaovana ilaina mba hihaona ny toromarika sy hanatsara ny asa bebe kokoa, anisan'izany fa tsy voafetra ho:
-Ny anarany, lahy na vavy, taona, daty nahaterahana, ny nomeraon-telefaoninao, fax isa, adiresy na ny adiresy mailaka, adiresy mailaka.
Ny tanjona sy ny antony manokana fanangonana tahirin-kevitra sy tsy voalaza anarana vaovao dia toy izao manaraka izao:
Omeo aminareo hiaraka amin'i fotoam-pivavahana avy amin'ny tranonkala,
Rehefa mampiasa ny tranonkala, dia afaka mamantatra ka hanamarina ny maha;
Aoka ianareo hahazo ny fihetseham-po ho anao, rehefa mampiasa ny tranonkala;
Ny mpanjifa mpiasa dia afaka mifandray anao raha ilaina;
Ny antontan'isa momba ny fampiasana ny tranonkala,
Ataovy mora kokoa ho anao ny hampiasa ny tranonkala;
Fitondran-tena tsena fikarohana fanadihadiana mba hanatsarana ny vokatra, ny tolotra sy ny tranonkala afa-po;
Fanangonana vaovao noho ny asa, fampiroboroboana ara-barotra sy ny fandaharana;
Manaraka ny lalàna, sy ny fitsipika governemanta manam-pahefana, anisan'izany fa tsy voafetra ho amin'ny fampiharihariana ny tahirin-kevitra sy fampahafantarana manokana;
Aoka isika sy ny mpiray, mpiray, mpiasa, mpandraharaha, mpiara-miombon'antoka na fanompoana hafa antoko fahatelo izay miasa amintsika ivelan'ny firenena misy anao hanao ny fampiroboroboana ny vokatra sy / na ny asa;
Diniho, hanamarina sy / na hamerina hijery ny bola, fandoavam-bola sy / na toerana mikasika ny asa no manome;
Fizotry ny fanitsiana toromarika misy fandoavam-bola, debit mivantana sy / na fandaharana bola amin'ny ny fangatahanao;
Mamela anao hiasa ny kaonty sy / na hanampy antsika hiala amin'ny fanompoana niavaka saram avy amin'ny tantaran'i.
Cookies / Tracking sy teknika hafa momba ny fampiasana ny Website
Rehefa mitsidika ny tranonkala, mampiasa Google Stats mba hanoratra ny zava-bitany amin'ny alalan'ny mofomamy. Ny mofomamy kely dia ny tahirin-kevitra ny iraka ny navigateur sy voatahiry amin'ny solosaina ny fiara mafy. Cookies ihany halefa any amin'ny solosaina ny fiara mafy rehefa mampiasa ny solosaina mba miditra ny tranonkala.
Cookies dia matetika ampiasaina mba hanoratra ny fahazarana sy ny tiany ny mpitsidika, rehefa variana zavatra isan-karazany eo amin'ny tranonkala. Ny vaovao nangonin'ny ny mofomamy dia unregistered iombonana antontanisa sy tsy ahitana tahirin-kevitra manokana.
Cookies dia tsy azo ampiasaina mba hahazoana antontan-kevitra eo amin'ny fiara mafy, ny adiresy mailaka, ary ny tahirin-kevitra manokana. Rehefa hijery ny tranonkala, dia afaka afa-tsy ny zavatra mba hisoratra anarana indray. Ny ankamaroan'ny navigateur dia preset ny hanaiky cookies. Afaka misafidy ny hametraka ny navigateur mba tsy hanaiky mofomamy, na mba hampahafantatra anao raha mofomamy no napetraka. Na izany aza, raha nametraka ny fandraràna ny mofomamy, dia mety tsy ho afaka hampavitrika na mampiasa ny lafiny sasany amin'ny tranonkala.
Raha tsy manala handràra na mofomamy, isaky ny mampiasa ny solosaina ihany ny miditra ny tranonkala (www.apstechgroup.com), ny tranonkala mpizara dia mampahafantatra antsika fa efa nitsidika ny tranonkala izahay, dia hamantatra anao sy ny fisoratana tahirin-kevitra ary ny fandoavam-bola tahirin-kevitra. , Fanangonana fanazavana momba ny fampiasana, tsena fikarohana, hazakazaka nandroso, ary ny fandraisana anjara amin'ny hetsika fampahafantarana.
Azonao atao ny manova ny toe-javatra eo amin'ny navigateur ny solosaina ampiasainao ny hiditra ny tranonkala mba hanapa-kevitra raha tsy ny hanaiky na mofomamy. Raha tianao, dia afaka hanova ny toe-javatra eo amin'ny navigateur. Raha toa ianao mametraka ny safidinao eo amin'ny navigateur, dia afaka manaiky mofomamy rehetra, mahazo fampahafantarana avy amin'ny mofomamy, ary na dia mandà ny mofomamy. Na izany aza, raha tsy misafidy ny mampiasa mofomamy na mandà mofomamy rehetra eo amin'ny navigateur, dia mety tsy ho afaka mampiasa na hampavitrika ny lafiny sasany ny tranonkala, na mety mila indray Login ny angona.
Save manokana tahirin-kevitra sy tsy voalaza anarana vaovao
Ny tahirin-kevitra sy tsy voalaza anarana manokana vaovao izay manome ny aminay, dia efa nihazona ihany mandra-tanjon 'ny famoriam-bola efa nahatratra, raha tsy nihazona araka ny lalàna sy fitsipika azo ampiharina.
Web fanadihadiana service (Google Analytics / Universal Analytics)
Mety mampiasa Google Analytics, na asa mitovy amin'izany eo amin'ny tranonkala. Ireo no asa nomen'ny antoko fahatelo, izay mety ho hita any amin'ny firenena rehetra maneran-tany (ao amin'ny raharaha Google Analytics Google LLC any Etazonia, www.google.com) ary izay mamela antsika mba handrefesana sy mamantatra ny fampiasana ny tranonkala ( amin'ny fototry ny manafina anarana). Izany no tanjona, Cookies maharitra ampiasaina, izay napetraky ny tolotra. Ny tolotra tsy mandray (ary tsy mitana) na manokana angona avy aminay, fa ny tolotra dia mety manara-maso ny fampiasana ny vohikala, mitambatra izany vaovao miaraka amin'ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala hafa efa nitsidika sy izay ihany koa fantarina ny tsirairay avy fanompoana Ilaintsika sy afaka mampiasa izany vaovao ho an'ny tanjona ny azy (ohatra ny mifehy ny dokam-barotra). Raha voasoratra ara-panjakana ny tolotra, ny tolotra ihany koa ny mahalala ny maha. Amin'ity tranga ity, ny fanodinana ny tahirin-kevitra manokana ny tolotra dia natao araka ny angona fiarovana lalàna. Ny tolotra ihany no manome antsika ny amin'ny tahirin-kevitra momba ny fampiasana ny tranonkala tsirairay (fa tsy misy mombamomba anao).
Ankoatra izany, dia mampiasa plug-ins avy amin'ny tambajotra sosialy toy ny Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest na Instagram eo amin'ny tranonkala. Izany no hita maso ho anao (matetika miorina amin'ny tsirairay tandindona). Efa voaendrika ireo singa ho kilemaina ny toerana misy anao. Raha hampavitrika azy ireo (amin'ny fipihana eo aminy), ny mpandraharaha ao amin'ny tambajotra sosialy tsirairay avy dia mety manambara fa ianao no eo amin'ny tranonkala, ary aiza eo amin'ny tranonkala ianao, ary tena afaka mampiasa izany vaovao araka izay mahamety azy. Io fikarakarana ny angon-drakitra manokana mametraka ao amin'ny andraikitry ny tsirairay sy ny mpandraharaha mitranga araka ny angona fiarovana lalàna. Tsy mandray misy vaovao momba anareo tsy ho azon'ny mpandraharaha tsirairay avy.
Efa naka mety fandaminana ara-teknika sy ny fiarovana fepetra mba hiarovana ny angon-drakitra manokana avy amin'ny tsy nahazoan-dalana fidirana sy hanjakazaka toy ny politika anatiny, fampiofanana, IT sy ny tambajotra fiarovana vahaolana, fanaraha-maso ny fidirana sy faneriterena, fanafenana ny tahirin-kevitra mitondra sy ny fampitana, fisafoana.
Maintsy mba hanome Manokana Data To Us
Ao amin'ny teny manodidina ny raharaha fifandraisana dia tsy maintsy manome anay akory va manokana tahirin-kevitra izay ilaina ho amin'ny fanatsoahan-kevitra sy ny fanatanterahana ny raharaham-barotra fifandraisana sy ny fanatontosana ny fifanarahana adidy (toy ny fitsipika, tsy misy didy takina mba hanome antsika amin'ny angon-drakitra) . Raha tsy misy izany vaovao, isika, dia matetika no tsy nahazo niditra tao, na hanatanteraka ny fifanarahana miaraka aminao (na ny fikambanana na ny olona izay maneho). Ankoatra izany, ny vohikala dia tsy azo ampiasaina raha tsy fanazavana sasany no nampahafantatra mba hahafahan'ny angona fifamoivoizana (oh: IP adiresy).
Fanovàna izany Data fiarovana Statement
Mety ataovy tsara izany fiarovana Statement Data na oviana na oviana tsy misy filazana mialoha. Ny ankehitriny dika navoaka tao amin'ny tranonkala dia ampiharina. Raha fiarovana ny Data Fanambarana dia ampahany amin'ny fanekena aminareo, dia hampahafantatra anareo ny e-mail na fomba hafa mety raha misy zavatra fanitsiana.
Fast Niandraikitra Car Charger miaraka Cable , Fast Niandraikitra PCB Desgin , USB adaptatera , plug Adatpter Pcba , Car Charger adaptatera Factory , Desgined USB Charger ,